Jahnvi, Ishaan, Kartik, Sara Ali Khan Iyo Kuwa Kale Oo Lagu Casuumay Daawashada Filmka Kedarnath (+Sawiro) – Filimside.net
Jahnvi, Ishaan, Kartik, Sara Ali Khan Iyo Kuwa Kale Oo Lagu Casuumay Daawashada Filmka Kedarnath (+Sawiro)
Maalitan barita ah oo ay taariikhda ku beegantahay 7 December waxaa si rasmi ah tiyaatarada loo saari doona filmka Kedarnath ee Sara Ali Khan kusoo caan baxeysa kaaso Sushant Singh Rajput la jilaayo.
Ugu dambeyn Saif Ali Khan iyo Amrita Singh gabadhooda Sara Ali Khan bari ayaa daafaha caalamka laga daawan doona maadama markii ugu horeysay shaashada kasoo muuqaneysa iyo filmkeeda kowaad.
Kadernath waa sheeko jaceyl oo dhaqan, diin iyo fataahadaha Hindiya ka dhacaayo xili adag sheeko ahaan la isku dhex lifaaqay waxayna dadka qaar leeyihiin waa Titanic Hindiya oo dhaqanka Hinduuga lagu saleeyay murano badana ka dhalan karaan daawashadiisa.
Kadernath waa sheeko jaceyl oo dhacday xiligii daadadka xooganaa iyo fataahadaha Hindiya ka dhaceen June 2013 oo weliba bur buriyeen fatahaadahan mandar caan ah iyo tuuladada ku hareereesneed waxaana ku dhinteen boqolaad dad ah waxaana isku dhex jeclaadeen mashaqadan labada filimka ku socdo Sushant Singh Rajput & Sara Ali Khan.
Hadaba kooxda mashruucan ayaa xaflad casuumad ah u sameyeen filmkaan bari la daawan doono waxayna ku casuumeen xidigaha dhowr ah kuwii imaadeen waxaa kamid ahaayen xidigaha sanadkaan soo caan baxeen Ishaan Khattar iyo Janhvi Kapoor.
Haa, Ishaan, hooyadisa Neelima Azim, Janhvi Kapoor, Sara Ali Khan, Kartik Aryan, Ananya Panday, Khushi Kapoor, Arjun Rampal iyo kuwa kale ayaa ka qeyb galeen casuumada daawashada mashruucan halkaan hoose ka daawo xidigaha sawirada laga soo qabtay..